Maxaa ka jira in John Cena uu ka fariistay Ciyaaraha WWE/MASAARICADA?? – Gool FM
(America) 23 Nof 2018. Xiddiga Caanka ah ee ciyaaraha WWE ama waxaad u taqaanaan Masaaricada John Cena ayaa sanadkan si aan joogta ahayn uga soo muuqanayay WWE maadaama uu dhisayay waayihiisa Cajiibka ah ee Hollywood-ka.
Waxaa la isla dhex marayay inuu ka fariistay Masaaricada balse WWE ayaa si buuxda u beeniyay warkaasi iyagoona xaqiijiyay in Cena uu dib u soo laaban doono bisha soo socota isagoona ka qeyb gali doona Royal Rumble.
Cena ayaan ka soo muuqan ciyaarihii Masaaricada ee lagu qabtay dalka Sacuudiga dhawaan taa oo sii hurisay shakiga laga qabay mustaqbalkiisa WWE.
Waxaa la sheegay in isaga iyo Daniel Bryan laga saaray Liiska u safrayay Sacuudiga daqiiqadihii ugu dambeysay maadaama ay diideen inay ka qeyb qaataan sababo la xiriira Dilkii wariye Jamal Khashoggi loogu geystay Safaarada Sacuudiga ee dalka Turkiga.
Yeelkeede, John Cena ayaa iminka la xaqiijiyay inuu soo laaban doono bisha soo socota.